RudderStack: Dhis Qalabkaaga Macluumaadka Macaamiishaada (CDP) | Martech Zone
RudderStack: Dhis Qalabkaaga Macluumaadka Macaamiishaada (CDP)
Jimco, Oktoobar 16, 2020 Khamiista, Oktoobar 15, 2020 Douglas Karr
RudderStack waxay ka caawisaa kooxaha injineernimada xogta inay qiime badan ka qaadaan xogta macaamiisha, iyadoo la adeegsanayo Mashruuca Xogta Macmiilka (CDP) oo si gaar ah loogu talagalay horumariyeyaasha. RudderStack waxay ururisaa xogta shirkadda meel kasta oo macaamiil taabasho ah - oo ay kujiraan shabakadaha, mobilada, iyo nidaamyada gadaal - waxayna u dirtaa waqtiga dhabta ah in ka badan 50 meelaha daruuraha ku saleysan iyo bakhaar kasta oo weyn oo xog ah. Adoo mideynaya oo falanqeynaya xogta macaamiishooda si qarsoodi ah iyo nabadgelyo ahaan, shirkadaha ayaa markaa awood u leh inay u rogaan ficillo ganacsi oo ku saabsan dhammaan shaqooyinkooda.
CDP-yada dhaqameed waxay isku dayeen inay xalliyaan xog aruurinta iyo howlgelinta, laakiin nasiib daro, badankood waxay dhibaatada ka sii darayaan iyagoo abuuraya silos xog dheeri ah iyo nusqaanno isdhexgal ah. Injineerada xogta badanaa waxay isku arkaan inay dhexda ka dhegan yihiin, kaliya qayb ahaan waxay ka faa'iideysanayaan awoodda qalabka sida Snowflake iyo DBT sababta oo ah qaybaha kale ee xidhmooyinku kuma milmayaan shaqadooda xogta ee ballaadhan.
RudderStack wuxuu dhigayaa horumariyeyaasha, aaladaha ay doorbidaan, iyo qaabdhismeedka casriga ah hore iyo bartamaha, isagoo ka caawinaya injineerada xogta iyo shirkadooda inay helaan fursado cusub oo awood leh sida ay ugu xirmaan nidaamyadan muhiimka ah ugana dhigaan inay ka shaqeeyaan guud ahaan ururka.
RudderStack Cloud: Qaab Cusub oo Loogu Talagalay Macluumaadka Macaamilkaaga
Mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee u haajira RudderStack Cloud waa Maqnaanshaha, Fariin il furan iyo madal wadashaqeyn oo loo dhisay deegaanno lagu kalsoon yahay. Shirkaddu waxay gacanta ku haysaa tiro aad u tiro badan oo xog ah oo ay soo saareen macaamiishooda shirkadda waxayna ku dhisteen kaabayaasheeda CDP qalab casri ah, oo ay ku jiraan Snowflake, DBT, iyo RudderStack Cloud.
RudderStack Cloud, waxaan ka saarnay xayiraadaha ku saabsan mugga dhacdada waxaanna u diri karnaa dhammaan xogta aan dooneyno Snowflake. Waan falanqeyn karnaa oo ku dhaqmi karnaa dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee macaamiisha, ugu dambayntiina waxaan noqon karnaa ganacsi xog badan wata. ”
Alex Dovenmuehle, Madaxa Macluumaadka Injineeriyada, Arrinta ugu Muhiimsan
RudderStack Cloud waxay u sahlaysaa injineerada xogta inay soo uruuriyaan, ansaxiyaan, beddelaan, oo ay u gudbiyaan xogta macaamiisha bakhaarkooda, adeegyada geynta waqtiga-dhabta ah, iyo codsiyada daruuriga ah ee ay adeegsadaan kooxaha guud ahaan shirkadda. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Daruur Casri ah - Lagu dhisay Kubureteska adduunka daruuriga ah, oo diiradda saarey cabirka xad dhaafka ah iyo dulqaad la'aanta, oo leh aasaas furan oo furan, qaab dhismeedka asturnaanta-qarsoodiga ah, iyo qalab horumarineed oo diirada saaraya si ay u fududaato in wax soo saarka la dhexgeliyo meesha aad hadda ku jirto, iyadoo la ilaalinayo sahlanaanta isticmaalka taas. wuxuu la yimaadaa daruuraha SaaS.
Xarunta Bakhaarka Xogta - RudderStack Cloud wuxuu kuu oggolaanayaa inaad bakhaarkaaga u beddesho CDP oo leh astaamo sida la isku habeyn karo, isku-dhafan-waqtiga dhabta ah, iyo SQL oo ah Ilo, oo bakhaarkaaga u rogaya RudderStack Source.
Horumar Sameeye - RudderStack ayaa rumeysan in xog ururinta macmiilka ay leeyihiin kooxda injineernimada, waana sababtaas sababta keentay in badeecadeennu had iyo jeer horumariso oo ay la jaanqaado aaladaha ay hore u isticmaalaan una jeclaadaan
RudderStack Cloud waa badeecada xogta ugu waxtarka badan, la awoodi karo oo casriyeysan ee soo-saareyaasha.
Saxiix Maxkamad Bilaash ah oo 14-maalmood ah
Tags: CDPMadal Macluumaadka Macaamiisharudderstackdaruurta rudderstack
Buuggaaga Ciyaaraha Ciyaarta ah Si Aad Ugu Gudbiso Guul 2020 Fasax Ah
Swaarm: Toos u hagaaji, kor u qaad, oo Cabir Waxqabadkaaga Xayeysiinta